फेरि 'बन्द' ????, हैन दसैँ !!!
ब्लग अपडेट नगरेको पनि धेरै भयो । केही कार्य व्यस्तता र केही भने आफ्नै अल्छीपनका कारण धेरै दिन सम्म यो पन्नामा केही नयाँ कुरा हालिएको थिएन । हिजो आफ्नै किनमेलको लागि बाटोमा निस्कँदा अचानक बाटोमा एउटा ‘फोटो ब्लग’ बनिरहेको देखेँ । क्यामरा बोकेकी थिईँन त्यसैले साथमा रहेको मोबाईल क्यामराबाट ३-४ क्लिक गरी हालेँ ।
एउटा अनौपचारिक आँकडाका अनुसार दसैँको समयमा काठमाण्डौबाट करिब ३० देखि ४० % सम्म मानिसहरू बाहिर अर्थात काठमाण्डौबाट आ-आफ्नो घर फर्कन्छन् । त्यसैले भन्नलाई दसैँको रमझम भने पनि दसैँकै बेलाको काठमाण्डौ अरु बेलाको भन्दा केही सुनसान र खाली-खाली जस्तो देखिन्छ ।
बाहिर घर हुनेहरु आ-आफ्ना घर फर्कनाले मात्रै हैन, स्कूल, कार्यालय र प्राय: कुनैपनि किसिमका ओपचारिक कार्यक्रमहरु यो बेलामा नहुने भएकोले काठमाण्डौका सडकमा गुड्ने गाडिको संख्यामा यति बेला उल्लेख्य रुपमा कमी आएको हुन्छ । यसै कारण कुनै कुनै ठाउँमा त यो केही दिन सडक चकमन्न भएर ‘बन्द’ नै भएको हो कि जस्तो पनि आभास हुन्छ ।
हिजोको दिन तुलनात्मक रुपमा अरु दिन भन्दा केही चिसो भएको र बेला बेलामा पानी पनि परेकोले पनि सायद सडक अरु दिनभन्दा सुनसान र खाली थियो हिँजो ।
ल त, दसैँको शुभकामना सहित दसैँले रित्याएको काठमाण्डौका सडकका केहि झलकहरु :
(बानेश्वर हाइटको यो सुनसान सडक- अरु बेलामा यहाँ 'जाम' नै लाग्ने गर्छ )
(चाबहिल जोडने कालोपुल- दसैँ लागेर सुनसान छ)
(रातोपुल बाट गौशाला जाने बाटो--अरु बेलामा यहाँ बाटो काट्न पनि मुश्किल हुन्छ)
(बन्दको बेलामा बाहेक अरु बेलामा काठमाण्डौमा यस्तो खाली सडक देख्नुभा छ? )